Abalandeli bezohwebo be-HVLS balishintsha kanjani ibhizinisi lakho?
ABASEBENZI ABAPHOLILE NAMAKHASIMENDE
Abalandeli abakhulu be-HVLS bezentengiselwano bapholisa umoya futhi benze umoya opholisa izinga lokushisa elisebenzayo (uzizwa ushisa kangakanani) ngo-8ºF. Abalandeli abakhulu bezimboni banikeza induduzo echazayo yezikhala ezingezona ezesimo sezulu nokonga okuphawulekayo kwemali ezikhaleni ezinomoya.
Umswakama ungalimaza imikhiqizo nezinto zokusebenza futhi udale izingozi zokushibilika. Ukusakazwa komoya njalo kunciphisa lezi zinkinga ngokuxuba umoya futhi kuvimbele ukufakwa kwomswakama futhi kunciphise umswakama. Umlandeli ojwayelekile waphansi akenzi njengoba untula ukusakazwa okuqhubekayo abalandeli bezezimboni nabashayayo abanakho.
Ukukhiqiza kwehla lapho abantu beshisa ngokungakhululekile. Ukuhamba komoya okwenziwa abalandeli bezimboni ezinkulu kukhulisa izindlela zemvelo zomzimba zokupholisa — ukupholisa okuhwamukayo — okwenza abantu bakhululeke kakhudlwana.
Ukugijimisa abalandeli abakhulu bophahla lwezimboni emuva kwenza i-updraft emnene ephoqa umoya oshisayo ophahleni bese wehlela esikhaleni esihlala abantu. Abalandeli be-HVLS ophahleni basiza ukusakazwa komoya - ukugcina abasebenzi bakho bafudumele.